Na-elele Ntughari Mgbasa Ozi Gị Online Martech Zone
Na-enyocha Ntugharị Mgbasa Ozi Gị N'ịntanetị
Na Mọnde, Nọmba 24, 2009 Wednesday, October 15, 2014 Douglas Karr
Otu ihe dị ukwuu gbasara ịzụ ahịa na ntanetị bụ na ọrụ gị bụ ihe emeghe ka ụwa wee hụ. N'iburu eziokwu ahụ bụ na ọ, ọ na-eju m anya ihe ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, na ọbụna gọọmentị mpaghara anyị na-eche mgbe ha na -go ọrụ maka enyemaka.
Ọ dị ezigbo mma ịkwado ndị ọkachamara n'ịntanetị gị:
Ọ bụrụ na ị na-achọ a Search engine Optimization ike, kwusi ile anya! SEOlọ ọrụ SEO kachasị mma bụ ụlọ ọrụ ndị ọkachamara ọwa niile, na-achọpụta etu ọdịnaya, email, mobile, na mmekọrịta mmadụ na ibe ya si emetụta ihe nchọta ọchụchọ gị. SEO bụ nsogbu nsogbu mgbakọ na mwepụ, ị nweta nsonaazụ ahịa azụmaahịa bụ nsogbu mmadụ ma chọọ ihe karịrị ụbọchị ol nke isiokwu nri. Inye ụlọ ọrụ SEO adịghị mma nwere ike ibibi ikike ụlọ ọrụ gị ruo ọtụtụ afọ - yabụ gaa n'ihu na ịkpachara anya dị oke egwu.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a Social Media ọkachamara, Chọọ onye na-enyere azụmahịa dị ka nke gị aka iru ha na mgbasa ozi mmekọrịta. Anaghị m ekwu na onye ahụ zụrụ ọtụtụ ndị na-eso ụzọ. Anaghị m ekwu okwu isi okwu ma ọ bụ onye edemede nwere atụmatụ dị iche karịa azụmahịa gị. Ana m adụ gị ọdụ ka iwepụta oge ụfọdụ n'ịntanetị wee jụọ onye nọ ebe ahụ na-enyere azụmaahịa dịka nke gị aka. Offọdụ n'ime ọkacha mmasị m maka na ụlọ ọrụ na-amaghị… ma ahịa ha skyrocketed.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a Mbọn ma ọ bụ ụlọ ọrụ chebere Cheta na mma bụ naanị akpụkpọ miri na weebụsaịtị, oke! Anyị esorowo ndị ahịa rụọ ọrụ mmefu ha na ụlọ ọrụ na-ere ahịa nke kpochapụrụ ọkwa ọchụchọ ha ma kpochapụ iyi ha nke ụzọ mbata. Lọ ọrụ ụlọ ọrụ dị mma bara uru, mana naanị mgbe ha na-eme ka ị hụ na ị na-aga n'ihu na-eto nsonaazụ azụmaahịa gị, ọ bụghị naanị iwulite saịtị ma ọ bụ akara mara mma.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe Marketinglọ Ọrụ Na-ahụ Maka Marketingntanetị, Gaa na ụlọ ọrụ ndị ị na-enwe mmasị ịkparịta ụka na ntanetị ma chọpụta onye ha na-eji maka ahịa. Chọọ ndị folks nwere nnukwu saịtị, nnukwu mmemme email, na-enweta nsonaazụ ọchụchọ ma pụta na mgbasa ozi mmekọrịta. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, chọọ ụlọ ọrụ ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ nke ọma. Jụọ dọkịta gị eze, jụọ mpaghara Pizza gị na ya, jụọ ndị na-ere gị, jụọ ndị ọrụ gị… .ask… jụọ… jụọ. Ọ bụrụ na ị zaghachi ahịa ha, enwere ike na ndị ọzọ na-aza.
Echekwala na ị gaghị akwụli ụgwọ ụlọ ọrụ ahụ. Echekwala na ha anaghị enwe efe inyere gị aka. Nnukwu ụlọ ọrụ ga-ezo aka na gị nye ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka ma ọ bụrụ na ha enweghị akụnụba ma ọ bụ na-enweghị ọnụahịa gị.
Tags: gị n'ụlọngabranding gị n'ụlọngambọn ụlọ ọrụụlọ ọrụ ahịaụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ịntanetịnyocha ahịa ọkachamaranjikarịcha ọchụchọsiri ikeelekọta mmadụ ahịa gị n'ụlọngaonye na-ahụ maka ịzụ ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe yaonye na-ahụ maka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ
Obi ụtọ #tweetsgiving na #indytweetsgiving